Dhageyso: Tahriibayaasha u xiran magafe oo dhagtooda lagu dhibciyay war farxad galiyay | kowtharmedia.com
Home WARAR Dhageyso: Tahriibayaasha u xiran magafe oo dhagtooda lagu dhibciyay war farxad galiyay
Dhageyso: Tahriibayaasha u xiran magafe oo dhagtooda lagu dhibciyay war farxad galiyay
Hay’adda Q.M u qaabilsan arrimaha socdaalka ee IOM ayaa sheegtay in ay jiraan dadaalo lagu soo samata bixiyo ku dhowaad 200 muhaajiriin ah oo ka yimid Somalia iyo Ethiopia kuwaasoo magafayaal ay afduub ahaan ugu haystaan Libya, sidoo kalena ay madaxfurasho ka dalbanayaan.
Dhinaca kale, safaaradda Somalia ee Libya ayaa sheegtay in dadkaasi lagu hayso meellaha ay ka taliyaan mucaaradka Libya, isla markaana ay adag tahay inay dadkaasi wax u qabtaan mar haddii aanay tagi karin halkaasi oo aan loo oggoleyn.
IOM waxa ay sidoo kale sheegtay in dadaal xoogan ku bixin doonto samatabixinta dadkaasi u afduuban magafayaasha liibiya.
Danjiraha Soomaaliya ee Libya Muxyadiin Kaalmooy oo wareysi siiyay laanta afka soomaliga ee VOA ayaa ka hadlay qaabka IOM ay usoo bad baadineyso dadka ay heystaan magafayaasha.
Previous PostSawirro: Koonfur galbeed oo baydhabo kusoo bandhigtay ragii toogashada ku dilay Sheekh Madeer Sheekh Madgaab Next PostDaawo Sawirro: Dowladda turkiga oo soomalia ku wareejisay markab sida shixnad gargaar ah